महिलाले पाइन्ट लगाउन गरेको संघर्ष - Web Tv Khabar
बैशाख १, २०७८ बुधवार १७:१३ बजे
ती दुई महिलाले किन पाइन्ट नै रोज ? किन पाइन्ट लगाए ? फ्रेन्चले सन् १८५६ मा दिएको अन्तवार्तामा आफूहरु दुवैजनाले पुरुषले बराबर पारिश्रमिक पाउनका लागि पाइन्ट लगाएको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् । पाइन्ट लगाउनुले केवल पितृसत्तात्मक परम्परालाई मात्र अस्वीकार गर्दैन्, यसले महिलालाई अझ मौद्रिक शक्ति प्रदान गर्छ ।
त्यसपछि महिलाहरुको फेसन झन् छिटो फेरिन थाल्यो, पुरुषहरु नभएपछि उनीहरुले स्वतन्त्र भएर पाइन्ट लगाउन पाए । तर युद्धपछि पुरुषहरु घर फर्किए, धेरै महिलालाई कामबाट हटाइयो ।
अहिले पनि कार्यस्थलमा महिला र पुरुषले एकै किसिमको पोशाक लगाउने अधिकार भए पनि पुरुष समकक्षीको तुलनामा महिलाहरुको पोशाकमाथि विभिन्न टिप्पणी भइरहन्छ ।
हिस्ट्री अफ एस्टर्डेबाट गरिएको अनुवाद ।